हुरीले घरको छानो उडाएपछि सदायवस्ति विचल्लिमा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Main News National Photo News Politics Rojgari Khabar राजनीति स्थानीय हुरीले घरको छानो उडाएपछि सदायवस्ति विचल्लिमा
हुरीले घरको छानो उडाएपछि सदायवस्ति विचल्लिमा
सिरहा, ३१ वैशाख । गोलबजार नगरपालीका १० धोवियाधारका ३९ वर्षिय मुनिलाल सदाय, ४५ वर्षिय रामलाल सदाय र १८ वर्षिय सुलेन्द्र सदायका परिवार समसाझै खाना खाएर नजिकै रहेको पाहुना घरमा पुग्छन् । गत बुधबार विहानीपख आएको विनासकारी हावाहुरीले ओतलाग्ने घरको छानो उडाएदेखि उनीहरु दिनहुँ वेलुकाको खानाखाएर पाहुना घरमा पुग्ने गरेको हो ।
पछिल्लो केही दिनदेखि दिनहुँजसो पर्ने पानी र हावाहरी बाट बच्न उनीहरुको परिवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालिन सिरहा क्षेत्र नं. ५ का सासंद रहेका वेला उनकै संसदिय कोषबाट बनेको पाहुनाघरमा पुग्ने गर्दछन् । यी तीनजनामाको परीवारमात्र हैन करिव ४० घर परिवारको वस्तिरहेको यो गाउँका धेरैजसोको घरको छानो उडाएकाले उनीहरु सवै त्यही पाहुनाघरमा रात विताउने गर्दछन् ।
अपा· समेत रहेका मुनिलाल ६ महिने काखे छोरोसहित ६ जनाको परिवार अहिले त्यहि पाहुना घरका रात विताउने गर्दछन् । लौरोको सहारामा हिडडुल गर्ने मुनिलाल पैसा नभएकै कारण घरमर्मत गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन् । उनीभन्छन्, ‘म आफै अपा· छु, जसो तसो परिवार चलाईरहेको छु, बल्ल बल्ल बस्ने घर बनाएको थिएँ, त्यो पनि उडायो, अव कसरी बनाउने ? मुनिलालको ३ भाई छोरा र १ बहिनी छोरी छ ।
रामलालको घरपनि हावाले ढालिदिएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविका चलाउँदै आएका उनले पनि घर मर्मत गर्न सकेको छैन । जसोतसो परिवार पाल्दै आएका उनले घर भक्तिएपछि कसरी बनाउने भन्ने समस्यामा परेको बताए । उनलेभने, ‘दिनभरी अरुकोमा ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आउको छु, हावाले घरनै भत्कायो, हामीत विचल्लिमा परेका छौं, कसरी बनाउने सोच्नै सकिएको छैन । उनको सवै १० वर्ष मुनिका २ छोरी र १ छोरा छन् ।
१८ वर्षिय सुरेन्द्रको आफ्नै १० महिने छोरी छ । दुःखजिलो गरेर परिवार पाल्दै आएका सुलेन्द्रको हुरीवतासले घरको छानो उडाएपछि कसरी मर्मत गर्नेभन्ने अलमलमा परेका छन् । सुरेन्द्रमात्र हैन गाउँका धेरै सदाय परिवारको यही अवस्था छ ।
घुमिखोलाको किनारमा रहेको यो सदायवस्तिका ४० परिवारको उस्तै अवस्था छ । गाउँका सवैको उस्तै अवस्था भएकाले त्यही पाहुना घरमा पनि उनीहरुले ठाउँ पाउन सकिरहेका छैनन् । घरकै एकछेउमै भएपनि ओतलागन सक्ने अवस्था रहेकाहरु घरमै वस्ने गरेको गाउँका ५५ पर्षिय लिलिया दसायले बताए । उनलेभने, जसको घर थोरैपनि बचेको छ, ‘उनीहरु आफ्नै घरको एककुनामा ओतलाग्ने गर्छ बाँकी सवै त्यही पाहुना घरमा कोचुएर बस्नुको विकल्प छैन् ।
गाउँलहरुले हुरीले गाउँनै विस्थापितहुने गरी उडाउँदा समेत आफूहरुले कुनै राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे । गाउँलेहरुले चुनावका वेला गरिवलाई यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नेहरु आपत विपत परेको वेला फर्केर समेत नआएको भन्दै दुखेसो पोखे । गाउँका विरोचन सदायले भने, ‘चुनावका वेला दिनमै ५ जना नेता हामीलाई भोट देउ, तिमिहरुलाई घर बनाईदिन्छु, पानीको व्यवस्था मिलाउँछु, बालबालिकालाई पढ्ने स्कूल दिन्छु भन्थे । अहिले वस्ने घर नै उडाएको बेल कोही अनुहार देखाउन सम्म आएको छैन ।
बैसाख २६ गते बुधबार विहान आएको विनासकारी हुरीले सिरहामा एक वृद्धको मृत्युको साथै ठूलो संख्यामा घर टहराहरु एडाएका छन् । ठाउँ ठाउँमा विद्युतका पोलहरु भाचिएकाले अझै कतिपय गाउँहरुमा विद्युत सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । अवस्था सहज भए अझै एक हप्ता लाग्ने मिचैया विद्युत प्रशारण केन्द्रका प्रमुख शिवराम यादवले बताए ।
#Breaking #Headline1 #Headline2 #Main News #National #Photo News #Politics #Rojgari Khabar #राजनीति #स्थानीय